Wararka - Falanqaynta xaaladda horumarka suuqa ee warshadaha soo saaraya shandadaha sannadka 2020
Waxaa dhaqaajinaya horumarka dhaqaalaha adduunka iyo baahida suuqyada, warshadaha bagaashka dalkayga ayaa si xawli leh u horumaray tobankii sano ee la soo dhaafay, iyo baahida sii kordheysa ee suuqyada ayaa keentay in inta badan shirkadaha bagaashka ay ku socdaan wadada horumarka degdegga ah. Marka laga fiiriyo qaabka ganacsiga, qaabka ganacsiga ee boorsooyinka guryaha ayaa inta badan ah ODM / OEM, silsiladda warshadaha waxay ku urursan tahay qalabka kore iyo macdanta dhexe. Marka laga fiiriyo cabirka iibka warshadaha, dakhliga iibka ee shirkadaha loo xilsaaray boorsooyinka sanadka 2019 wuxuu ahaa 141.905 bilyan yuan, hoos u dhac sanadle ah oo gaaraya 1.66%. Marka laga eego cabirka suuqa bagaashka, suuqa shandadaha dalkayga ee sannadka 2019 wuxuu ku saabsan yahay 253 bilyan yuan, korodh dhan 22.64% sanadkiiba, korodhka korodhkuna wuxuu ka horreeyaa adduunka. Marka laga eego aragtida horumarinta gobolka ee warshadaha, warshadaha bagaashka Shiinaha ayaa si aad ah uga soo ifbaxay gobollada xeebta ee Guangdong, Fujian, Zhejiang, Shandong, Shanghai, Jiangsu, iyo berriga Hebei iyo Hunan. Warshadaha bagaashka ayaa hada sameystay kooxaha Huadu, Guangdong, kooxaha Warshadaha ee Pinghu, Zhejiang iyo Baigou, Hebei.
Shiinaha waa soo saare weyn ee shandadaha, inta badan ODM / OEM
Shandadaha waa aalado badanaa la isticmaalo oo lagu keydiyo boorsooyinka safarkayaga maalinlaha ah. Waxaa dhaqaajinaya horumarka dhaqaalaha adduunka iyo baahida suuqyada, warshadaha bagaashka dalkaygu si xawli ah ayey u horumareen tobankii sano ee la soo dhaafay. Baahida sii kordheysa ee suuqa ayaa keentay inta badan shirkadaha bagaashka inay ku socdaan wadada horumarka degdega ah. Warshadaha bagaashka ee Shiinaha ayaa xukumay adduunka, kaliya ma ahan xarunta wax soo saarka adduunka, laakiin sidoo kale suuqa ugu weyn adduunka ee macaamiisha. Maaddaama ay tahay soo saaraha ugu sarreeya adduunka ee bagaashka iyo boorsooyinka, Shiinaha wuxuu leeyahay kumanaan soosaarayaasha bagaashka wuxuuna soo saaraa ku dhowaad saddex-meelood meel boorsooyinka iyo boorsooyinka adduunka, qaybtiisa suuqa lama dhayalsan karo.
Marka laga fiiriyo qaabka ganacsiga, suuqa shandadaha guryaha waa mid aad u tartamaya, qaabka ganacsigu inta badan waa ODM / OEM, silsiladda warshadaha waxay ku urursan tahay qalabka kore iyo macdanta dhexe. Ciyaartoyda suuqa ugu muhiimsan ee warshadaha wax soo saarka bagaashka dalkaygu waa soosaarayaasha waxsoosaara, soosaarayaal xirfadlayaal ah iyo shirkado caan ah. Waqtigan xaadirka ah, inta badan shandadaha iyo shirkadaha bacda wadankeygu waxay ku urursan yihiin soosaarayaasha wax soo saara. Shirkadaha noocan oo kale ah guud ahaan waa kuwo miisaan yar oo aad u tiro badan, oo leh qiimo yar oo alaabooyin ah iyo tartan suuqeed oo aad u kulul. Soosaarayaasha xirfadleyda ah waa kuwo baaxad weyn leh, waxay leeyihiin R&D gaar ah iyo karti naqshadeynta, sidoo kale waxay ilaashadaan alaabtooda gaarka ah Kuwa ka shaqeeya shandadaha shandadaha ayaa inta badan ka yimid dibedda, iyaga oo si fiican u yaqaan 'R&D', qaabeynta iyo isku xirka iibka oo leh heerka ugu sarreeya ee macaashka alaabada.
Horumarka degdegga ah ee suuqa, heerka koritaanka ee adduunka hoggaaminaya
Marka laga eego dakhliga iibka warshadaha, shandadaha waa mid ka mid ah qaybaha waaweyn ee warshadaha maqaarka ee ugu weyn. Sida laga soo xigtay xogta ay soo saartay Ururka Hargaha Shiinaha, illaa dhammaadka 2018, waxaa dalkayga ka jiray 1,598 shirkadood oo bagaash ah, oo wadarta wadarta iibka iibku yahay 150.694 bilyan yuan, koror sanad-sannadeedka ah 2.98%. Sannadkii 2019, dakhliga iibka ee shirkadaha bagaashka sida uu dhigayo xeerarku wuxuu ahaa 141.905 bilyan yuan, hoos u dhac sannadle ah oo gaaraya 1.66%.
Marka laga eego miisaanka guud ee warshadaha bagaashka, suuqa shandadaha dalkaygu waa mid aad u weyn oo ku jiray xilli xawaare isdaba joog ah sannadihii la soo dhaafay. Sida laga soo xigtay tirakoobka Euromonitor, laga soo bilaabo 2012 ilaa 2019, cabirka suuqyada warshadaha bagaashka wadankeyga wuxuu ka kordhay 130.2 bilyan yuan ilaa 253 bilyan yuan, celcelis ahaan heerka kobaca sanadlaha ah 9.96%, taasoo ka horeysa heerka kobaca adduunka.
Awoodda wax soosaarka warshadaha ayaa xoogaa urursan, iskutallaabooyinka warshadaha ayaa muuqda
Sida laga soo xigtay qaybta gobolka, warshadaha bagaashka ee Shiinaha ayaa si aad ah uga soo ifbaxay gobollada xeebta ee Guangdong, Fujian, Zhejiang, Shandong, Shanghai, Jiangsu, iyo inland Hebei iyo Hunan. Maaddaama ay tahay soo saaraha shandadaha adduunka ugu weyn, Shiinaha badeecadaha ay soo saaraan sideeddan gobol waxay ka dhigan yihiin in ka badan 80% saamiga suuqa dalka. Marka la barbardhigo fiiqan, horumarinta warshadaha shandadaha ee gobollada bartamaha iyo galbeedka baaxadda weyn ayaa si dhab ah uga dambeeya.
Marka laga eego aragtida meelaha wax soo saarka, awoodda wax soo saarka gudaha waxay inta badan ku urursan tahay saddexda aag ee alaabta waaweyn ee alaabada la isugu keenayo ee Shiling ee Guangdong Huadu, Pinghu ee Zhejiang, iyo Baigou ee Hebei; isla waqtigaana suuqyo xirfadlayaal ah sida Haining Leather City, Shanghai Hongkou Leather Center, iyo Guangzhou Leather City ayaa dhashay. . Goobahaan la isugu yimaado waxay gaarayaan ilaa 70% qiimaha soo saarida shandadaha dalkayga.
Xogta kor ku xusan waxay ka timid "Waxsoosaarka Waxsoosaarka Bacda Shiinaha iyo Baahida Iibka iyo Warbixinta Falanqaynta Saadaasha Maalgashiga" ee ay soo saartay Machadka Cilmi-baarista Warshadaha ee Qianzhan. Isla mar ahaantaana, Machadka Cilmi-baarista ee Qianzhan wuxuu siiyaa xalalka xogta weyn ee warshadaha, qorsheynta warshadaha, bayaanka warshadaha, qorsheynta baarkinka warshadaha, iyo dhiirrigelinta maalgashiga warshadaha.
Waqtiga boostada: Oct-29-2020